(Akhriso) Kulan u Dhaxeeya Madaxda Dowladda Iyo Maamul goboleedyada Oo La Filaayo Inuu Garoowe Ka Dhaco. – Kismaayo24 News Agency
by admin 27th January 2019 0114
Magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland, waxaa maanta lagu waddaa in uu ka furmo shir u dhaxeeya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynayaasha maamul goboleedyadda Dalka kuwaasi oo in muda ah tabasho ka qabay dowlada dhexe ee uu horkacaayo Madaxweyne Farmaajo.
Sida aan wararka ku heleyno Shirkaan ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo xalin lahaa tabashadda ay qabaan Madaxda maamul goboleedyadda oo wada shaqeyntii ay la lahaayeen dowlada dhexe ka gaabiyey.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlaayey xaflaadda caleema saarka madaxweynaha dowlada goboleedka puntland iyo ku xigeenkiisa ayaa shaaciyey in ay muhiim tahay adkeynta xiriirka wada shaqeeneyd ee u dhaxeeya dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka Maadaama Muddo uu soo taagnaa Khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda.
Ugu Danbeyntii Madaxda ku sugan magaalada Garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland ayaa sidoo kale la kulmi doona madax Puntland, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland.
Top News: Gudoomiyaha Galgaduud Cirfo oo afka furtey, Ahlusunna waa in……………….
Xildhibaan Fiqi: “Shaqsiyaad talada dalka isku koobay ayaa sababay xaalku halka uu marayo”
Dhagayso:- Fah Faahin Ganacsade Saaka lagu dilay Muqdisho